“Xilligaan Ma Habboona Ciidamo AMISOM Ka Tirsan In La Geeyo deegaanada Puntland”Ra’iisal Wasaaraha Somaliya Oo ka Hadlay Dagaalka Puntland Iyo Alshabaa | Berberatoday.com
“Xilligaan Ma Habboona Ciidamo AMISOM Ka Tirsan In La Geeyo deegaanada Puntland”Ra’iisal Wasaaraha Somaliya Oo ka Hadlay Dagaalka Puntland Iyo Alshabaa
Muqdisho(Berberatoday.com)-)-Ra’iisal Somaliya oo dib ugu soo laabtay Muqdisho, ayaa ka hadlay dagaallada Al-shabaab iyo maamulka Puntland u dhexeeya, isagoo sheegay inaanay xilligaan habboonayn in ciidammo AMISOM la geeyo Puntland.
RW Sharma’arke, ayaa kasoo laabtay safar uu ku tagay Talyaaniga, halkaasoo uu kula kulmay mas’uuliyiinta Talyaaniga oo uu ka mid ahaa RW wadankaas iyagoo ka wada-hadlay xoojinta xidhiidhka Somaliya iyo Talyaaniga iyo weliba sidii ay gacan uga geysan lahaayeen taageerada Somaliya.
“Ciidammo AMISOM ah in la geeyo Puntland, ma ahan mid loo baahan yahay. Ciidamada Puntland ayaa ku filan inay Al-shabaab ka hor-tagaan, anagana gacan ayaa ka geysanaynaa wixii nalooga baahdo, hore Deeqo ayaan ugu dirnay,” ayuu yidhi Sharma’arke oo la hadlay warbaahinta dawladdu muqdisho maamusho.
RW Somaliya ayaa sheegay in dagaal-yahanada Al-shabaab ee gaadhay deegaanno ka tirsan Puntland inay yihiin firxad, isagoo xusay inay isku dayayaan inay meelo badan tagaan.